Abesifazane abaningi baye nazo imvubelo ukutheleleka ekukhulelweni ekuseni. Lesi sifo sibangelwa yi-ukhunta Candida. Yingakho igama yesayensi sifo - candidiasis.
Izimpawu eyinhloko lesi sifo ukulunywa futhi ocucuzayo nokunjengoshizi uhlobo, ne iphunga oqinile omuncu. Yiqiniso, uphethwe kungaqinisekiswa wezifo zabesifazane kuphela, njengoba lezi zimpawu azicacile ukuze lesi sifo. Ngokwe ucwaningo kuyaziwa ukuthi imvubelo ongathwali into engalimaza umama okhulelwe noma umntwana wakhe, kodwa namanje ezimnandi ngokwanele, yingakho kufanele ukuqeda. Namuhla, lapho ngempela izindlela ezimbalwa ukwelapha lesi sifo fungal kukhona. Kukholakala ukuthi abathwali Candida kukhona kokubili amadoda nabesifazane. Lokhu ukutheleleka ungaphakathi cishe zonke izinto eziphilayo, kodwa awukwazi uqobo ube neminyaka. Futhi kuphela ukwehla amasosha omzimba, ziqala ukuvela izimpawu inkwethu, lokhu nokuthi kwenzekani emzimbeni owesifazane okhulelwe. Futhi imvubelo inkulumo ngesikhathi sokukhulelwa kungadalwa egqoke izingubo zangaphansi zokwenziwa, noma njalo kakhulu, izenzo zocansi indawo lapho ohlukumezekile odongeni lwesitho sangasese sowesifazane. Enye imbangela kungase kube sowesifazane sangasese imvubelo overgrowth, ezihlukahlukene izifo kohlelo genitourinary kanye ipheshana emathunjini.
Vele ukuchaza ukubonakala inkwethu kungaba ngokuya izitho zomzimba, njengoba ukukhulelwa kushintsha microflora lwesitho sangasese sowesifazane. izimo ezikahle sokuthuthukiswa imvubelo somzimba lizinga lelitfutfukile hormone zesifazane, okuyinto eyenzeka ngesikhathi sokukhulelwa.
Abanye ochwepheshe bangase baphikise ngokuthi "zizalela emhlabathini" izilonda iyona isisu namathumbu. Ngo isiqinisekiso lokhu - iningi labesifazane uhlushwa inkwethu, e ukuhlaziywa indle wathola lolu hlobo isikhunta.
Indlela ukwelapha imvubelo ukutheleleka phakathi nenkathi yokukhulelwa? Eminye yemithi esetshenziswayo
Wonke umuntu uyazi ukuthi imithi ngesikhathi sokukhulelwa , cishe yonke contraindicated. Futhi self-ukwelashwa Yiqiniso, asikwazi ukukwenza. Kuyadingeka ukuqonda, kuka ukwelapha imvubelo ukutheleleka phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Thrush ekukhulelweni - into lalivamile, ngakho-ke, izindlela aphathe akwanele. Noma kunjalo, abanye esebenzisa inkwethu ekukhulelweni is best athathwe? Into esemqoka ekwelapheni candidiasis - kuyinto ukuphepha impilo umbungu. amalungiselelo nezokusigcoba Safe ezibhekwa - "Miconazole" futhi "clotrimazole" kanye "Pimafutsin". Le mithi akudingeki nomphumela anobuthi embungwini.
Indlela ukwelapha imvubelo ukutheleleka phakathi nenkathi yokukhulelwa? amakhambi abantu
Ngaphezu imithi, kunezindlela eziningi ezithandwayo ukuqeda imvubelo ukutheleleka. Okuvame kakhulu uhlanza zangasese umhluzi-oak amagxolo, nosawoti, sodium tetraborate nge glycerol, njll Kodwa Kufanele kwaziwe kodwa ukuthi uma usebenzisa amakhambi abantu, ezifana Caving, isikhathi esifushane izimpawu kuphela zinyamalale, ikhambi imvubelo ukutheleleka ngale ndlela kuyinto engenakwenzeka.
Omunye ephumelela kunazo nezindlela esheshayo ukuqeda imvubelo ukutheleleka:
Ngo ilitha yamanzi abilisiwe ugcwalise soda isipuni teaspoonful iodine. Ukuthululela ikhambi okuholela emcengezini, ukuze ahlale cishe imizuzu engu-20. Inqubo liphindwe izikhathi 2-3.
Indlela ukwelapha imvubelo ukutheleleka ngesikhathi sokukhulelwa futhi indlela ukunquma
Ikhambi imvubelo ukutheleleka ngesikhathi sokukhulelwa kufanele kube olunzulu futhi into yokuqala ukubonakala izimpawu zaso ngesikhathi sokukhulelwa kufanele kuveze izici ezibanga okubi kakhulu yayo, kungaba isifo esithathelwanayo, noma ezingamahlalakhona, noma ukuntuleka kwamavithamini emzimbeni.
Ukuze sithole i-ejenti causative lesi sifo zithathwa swabs, kanye urinalysis, ucwaningo igazi-HIV ne-smear ku-STI. Njengoba kubalulekile ukuvakashela i endocrinology futhi gastroenterologist. Phezu kokuthola yonke imiphumela yocwaningo bangase bakhethe isu ukwelashwa ngendlela ephumelela kakhudlwana.
Njengoba kubalulekile ukuthi siphakamise umzimba ukuze ukuqinisa amasosha omzimba futhi ngokuthola multivitamin kwabesifazane abakhulelwe.
Njengoba Ibhajethi ukubamba lomshado. izandla Wedding.